एमाले प’त्ता’सा’फ हुने भएपछि, राप्रपा र विवेकशील गु-हार्दै ओली ! – Points Nepal
एमाले प’त्ता’सा’फ हुने भएपछि, राप्रपा र विवेकशील गु-हार्दै ओली !
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ १०, २०७८ समय: १२:१८:५६
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यतिबेला सत्तारूढ गठबन्धन तोड्न निकै प्रयासरत देखिन्छन् । तर विगत ६ महिनादेखिको उनको प्रयास अहिलेसम्म सफल हुन सकेको छैन ।
प्रतिनिधि सभाको पहिलो विघटन (२०७७ पुस ५) गतेदेखि दोस्रो विघटनसम्म ओलीले कांग्रेसलाई कहीं न कहीं इन्गेज गरिरहेका थिए । प्रचण्ड देउवा र नेपालबीचको कसिलो गठबन्धन बन्न पाएको थिएन । तर आफूले छोड्नुपरे कुर्ची नै भाँच्ने धम्की दिएका ओलीका सामू गठबन्धन बनेरै छाड्यो । त्यसैले उनलाई हावाकावा खुवाएको छ ।
Last Updated on: January 27th, 2022 at 9:09 am